ओलीसामु यक्ष प्रश्नः पार्टी र विधि जोगाउने कि चोइटिएर जाने ? - Everest Dainik - News from Nepal
दीपक चुदाली, काठमाडौं । नेकपाको गत सचिवालय बैठकमा माधव नेपालले स्पष्टरुपमा नेकपा विभाजन हुन नसक्ने कुरा गरे ।
नेपालको भनाईको अर्थ थियो– अब एकता भाँडियो भनेर प्रचार गर्नुको कुनै तुक छैन । पार्टी एक भइसकेको छ, कोही व्यक्ति या समूह यो छोडेर जानसक्छन् । तर अब हिजोको माओवादी या एमाले भनेर पार्टी विभाजन हुँदैन ।
नेता नेपालको भनाईले स्पष्टरुपमा नेकपाभित्रको सघन एकतालाई प्रदर्शन गरेको छ । यसले ओली पक्षले भन्दै आएको पूर्व समूहको मान्यतालाई समेत खारेज गरेको छ ।
१. एकता संकटमा पर्दैन, पार्टी विभाजन हुन्न
त्यसैले आजको सचिवालय बैठकमा कुनै सहमति नभएमा पनि नेकपा नेकपा नै रहिरहन्छ । नेकपाको निर्णय मान्ने या नमान्ने स्वतन्त्रता अध्यक्ष ओलीलाई हुनेछ । उनले नेकपाको निर्णय मान्ने अवस्थामा उनी अल्पमतको विचारसहित नेकपाका सम्मानीत नेता हुनेछन्, उनले निर्णय नमान्ने अवस्थामा उनले पार्टी छोडन सक्नेछन् । तर यसो गर्दा नेकपा विभाजन भने हुने छैन । बरु नेकपाबाट उनी बाहिरिनेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले सयौंपटक पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको कुरा गर्ने गरेका छन् । यतिमात्र होइन, आफ्नो अंकगणित बलियो बनाउन उनले यही पूर्व समूहको मान्यतालाई रणनीति समेत बनाए ।
तर नेता नेपालहरुले स्पष्टरुपमा यसको प्रतिवाद गरे । पूर्व एमालेभित्रको ठूलो पंक्तिले यसलाई अस्वीकार गर्यो । यसले पूर्व समूहको मनोविज्ञान भत्काउने काम मात्रै होइन, नेकपालाई नै जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्यो ।
२. प्रचण्डको उच्च सुझबुझले जोगिएकोे नेकपा
याे पनि पढ्नुस नेकपाको सचिवालय बैठक शुरू, के-के विषयमा हुँदैछ छलफल ?
ओलीले जस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि इगो साँध्न खोजेको भए के हुन्थ्यो ? यो प्रश्न समेत महत्वपूर्ण छ । पार्टी के का लागि एकता गरिएको थियो भन्ने कुराको रत्तिभर ख्याल नराखि आफ्नो इगो र समूहगत स्वार्थका लागि विभाजनको षडयन्त्र ओलीले विगत लामो समयदेखि नगरेका होइनन् । दल परिवर्तनसम्बन्धी अध्यादेशदेखि हस्ताक्षर अभियानसम्म उनले बहुमतको कसरत गरेका हुन । स्थायी कमिटिमा बहुमत पुर्याउन उनको लामै कोशिस रह्यो ।
तर प्रचण्डले दुई कदम पछि हटेर यो षडयन्त्र असफल बनाए । भदौमा सम्पन्न एउटा स्थायी समिति बैठकमा केपी ओली अनुपस्थित भएपछि प्रचण्डले त्यतिबेला नै बहुमतले निर्णय गर्न सक्थे । तर उनले त्यसो गरेनन् । त्यसपछिका दिनहरुमा समेत सकेसम्म सहमतिका लागि प्रचण्डले भरमग्दूर कोशीस गरे ।
पछिल्लो सचिवालय बैठकमा समेत अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भए । प्रचण्डले ओली जस्तो इगो साँध्न खोजेको भए, व्यक्तिवाद, अहंकारवाद र दम्भ पालेर ‘भाड में जाए पार्टी’ भनेको भए के हुन्थ्यो । प्रचण्डको पक्षमा ६ जना सचिवालय सदस्य भएको अवस्थामा उनीहरुले त्यही निर्णायक निर्णय गर्न सक्थे । यदि त्यही अवस्थामा ओली भएका भए के गर्थे ?
तर प्रचण्डले त्यसो गरेनन् । जुनसुकै निर्णय गर्नुपरे पनि अध्यक्ष ओली उपस्थित भएकै बैठकमा गर्नुपर्छ भन्ने उनको मत रह्यो । यो विधि र पद्धतीको उच्च सम्मान हो । शक्ति र अधिकार छ भन्दै त्यसमो मनपरि उपयोग गर्ने कि त्यसलाई विधि र विवेकसम्मत ढंगले प्रयोग गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नलाई प्रचण्डले उच्चतमरुपमा प्रयोग गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस सकियो नेकपा सचिवालय बैठक, के–के भयो ?
३. ओलीको विकल्पः पार्टी विधि र पद्धती मान्ने कि चोइटिएर जाने ?
आजको सचिवालय बैठक नेकपाका लागि निर्णायक हुनेछ । तीनदिनको समय भएपनि यो बीचमा दुबै अध्यक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन । दोश्रो र तेश्रो तहका नेताहरुको निकै बढी दौडधुप, राष्ट्रपतिको सक्रियता र अन्य कैयन प्रयासका वावजूद पनि सहमति नजुटेपछि आजको बैठकमा ओली नजान सक्छन् । या उनीहरुले फेरी बैठकको मिति सार्न प्रस्ताव राख्न सक्छन् । तर जे जस्तो गरेपनि मुख्य कुरा ओलीले आफू दुई कदम हटेर लाखौं कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने हो ।
नेता नेपालले बारम्बार भन्ने गरेका छनः मेरो विरुद्ध ओलीले निर्णय गर्दा मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखे तर बहुमतको निर्णय स्वीकार गरे । के यही कुरा ओलीले लागु गर्न सक्लान् ।
तर ओलीको अहिलेसम्मको भनाई हेर्दा उनी आफूले भनेको भए त्यो एकताका पक्षमा र आफुले भनेको नभए त्यो एकतामा संकट हुने व्याख्या गर्दै आएका छन् । अल्पमत र बहुमतको निर्णय उनले मान्दैनन तर सहमतिमा पनि आउन चाहँदैनन् । सचिवालयका नौ जनामध्ये ६ जना स्पष्टरुपमा प्रचण्डको पक्षमा छन् तर एकतिहाई सदस्य आफुसँग भएका ओलीले उनको कुरामा सहमति खोज्छन् । उनको कुरा नमानेमा एकता अघिको अवस्थामा जानुपर्ने तर्क दिन्छन् । यो मुढेबलको राजनीतिक विचारले के सहमति सम्भव छ ?
आजको बैठकमा ओलीका अगाडि सच्चिने, बहुमत सदस्यको रायको सम्मान गर्ने या मेरै गोरुको बाह््र टक्का ठीक भने हिंडने दुई विकल्प बाँकी छन् । यो सचिवालयको बैठक मात्रै हो, यसपछि स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बाँकी छन जहाँ उनले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा लबिङ गर्न सक्छन् । उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कुरा धेरै पटक गरेका छन् । त्यसो भए उनले केन्द्रीय समिति किन फेस गर्न सक्दैनन् त ? पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेकै केन्द्रीय समिति हो । पार्टीमा आफूले गरेको सबै ठीक र त्यसलाई सबैले मान्नैपर्ने कुरा त कम्युनिष्ट पार्टीमा कहिँकतै लागु हुँदैन । त्यो त पूर्णरुपमा सर्वसत्तावाद न हो ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा सचिवालय बैठक आज, यी महत्वपूर्ण विषयमा हुँदैछ छलफल
त्यसैले एउटा स्पष्ट कुरा के हो भने नेकपा अब एकतापूर्वको अवस्थामा जाँदैन । यसको अर्थ यसमा बस्ने या नबस्ने स्वेच्छिक अधिकार हरेक सदस्यलाई छ । पार्टीले, पार्टीको कमिटिले गर्ने निर्णय मान्ने या नमान्ने हक सबैलाई छ । सहमति नहुँदा अपनाइने विधि भनेकै बहुमत अल्पमतको विधि हो । सहमति भएन भनेर पार्टीलाई जड र यथास्थितिमा राख्न मिल्दैन । उनले भनिदिएको मानेमात्रै सहमति हुने कुरा कुनै पनि मान्यता र विधिसम्मत हुन सक्दैन ।
उनका अगाडि विशाल पार्टी पंक्तिको सम्मान गर्ने कि आफ्नो अहम्लाई प्रधानता दिने प्रश्न उभिएको छ । चोइटिने कि पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने प्रश्न उभिएको छ ।
आजको बैठकले यसको छिनोफानो गर्नेछ । आशा गरौं अध्यक्ष ओलीले आफ्नो ओजपूर्ण इतिहासलाई अझै उच्च र सम्मानित बनाउनेछन् । पार्टीको निर्णय स्वीकार्नेछन् र एउटा सुखद उत्प्रेरणाको सञ्चार गर्नेछन् ।
ट्याग्स: नेकपा विवाद, सचिवालय बैठक